Krypton စျေး - အွန်လိုင်း KR ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Krypton (KR)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Krypton (KR) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Krypton ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Krypton တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Krypton များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
KryptonKR သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0502KryptonKR သို့ ယူရိုEUR€0.0426KryptonKR သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0384KryptonKR သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0459KryptonKR သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.457KryptonKR သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.317KryptonKR သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1.11KryptonKR သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.187KryptonKR သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0669KryptonKR သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0701KryptonKR သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1.14KryptonKR သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.389KryptonKR သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.266KryptonKR သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹3.76KryptonKR သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.8.37KryptonKR သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0689KryptonKR သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0759KryptonKR သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.56KryptonKR သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.35KryptonKR သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥5.3KryptonKR သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩59.94KryptonKR သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦19.03KryptonKR သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽3.69KryptonKR သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1.39
KryptonKR သို့ BitcoinBTC0.000004 KryptonKR သို့ EthereumETH0.000129 KryptonKR သို့ LitecoinLTC0.000875 KryptonKR သို့ DigitalCashDASH0.000582 KryptonKR သို့ MoneroXMR0.00058 KryptonKR သို့ NxtNXT4.13 KryptonKR သို့ Ethereum ClassicETC0.00706 KryptonKR သို့ DogecoinDOGE14.87 KryptonKR သို့ ZCashZEC0.000608 KryptonKR သို့ BitsharesBTS1.93 KryptonKR သို့ DigiByteDGB1.91 KryptonKR သို့ RippleXRP0.168 KryptonKR သို့ BitcoinDarkBTCD0.00178 KryptonKR သို့ PeerCoinPPC0.181 KryptonKR သို့ CraigsCoinCRAIG23.48 KryptonKR သို့ BitstakeXBS2.2 KryptonKR သို့ PayCoinXPY0.9 KryptonKR သို့ ProsperCoinPRC6.47 KryptonKR သို့ YbCoinYBC0.00003 KryptonKR သို့ DarkKushDANK16.53 KryptonKR သို့ GiveCoinGIVE111.54 KryptonKR သို့ KoboCoinKOBO11.74 KryptonKR သို့ DarkTokenDT0.0462 KryptonKR သို့ CETUS CoinCETI148.72